ဟဒီးဆ်: အကယ်၍ ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါက ဆွလာသ်ငါးကြိမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဂျုမုအဟ်တစ်ကြိမ်မှ နောက်ဂျုမုအဟ်သည်လည်းကောင်း၊ ရမဿွာန်တစ်လမှ နောက်ရမဿွာန်သည်လည်းကောင်း ယင်းတို့၏ စပ်ကြား၌ရှိသော အကုသိုလ်များအား ပလပ်စေမည်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကယ်၍ ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါက ဆွလာသ်ငါးကြိမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဂျုမုအဟ်တစ်ကြိမ်မှ နောက်ဂျုမုအဟ်သည်လည်းကောင်း၊ ရမဿွာန်တစ်လမှ နောက်ရမဿွာန်သည်လည်းကောင်း ယင်းတို့၏ စပ်ကြား၌ရှိသော အကုသိုလ်များအား ပလပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကြီးလေးသော အပြစ်အကုသိုလ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါက ဆွလာသ်ငါးကြိမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဂျုမုအဟ်တစ်ကြိမ်မှ နောက်ဂျုမုအဟ်သည်လည်းကောင်း၊ ရမဿွာန်တစ်လမှ နောက်ရမဿွာန်သည်လည်းကောင်း ယင်းတို့၏စပ်ကြား၌ရှိသော အကုသိုလ်များအား ပလပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဆွလာသ်ငါးကြိမ်သည် ယင်း၏စပ်ကြား၌ ပြုမိသည့်(သေးငယ်သော) အကုသိုလ်များကို ပလပ်စေသည်။ ကြီးလေးသော အကုသိုလ်များသည် (သောင်ဗဟ်)အမှားဝန်ချတောင်းပန်မှုပြုမှသာလျှင် ပလပ်စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ဂျုမုအဟ်ဆွလာသ်တစ်ကြိမ်နှင့် နောက်လာမည့် ဂျုမုအဟ်ဆွလာသ်သည်လည်းကောင်း၊ ရမဿွန်ဥပုသ်တစ်လနှင့် နောက်လာမည့် ရမဿွာန်သည်လည်းကောင်း ယင်းတို့၏စပ်ကြား၌ ပြုမိသည့်(သေးငယ်သော)အကုသိုလ်များကို ပလပ်စေသည်။
1: ဧကန်အမှန်ပင် ထိုဖရဿွ်တာ၀န်များကို အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် ထမ်းဆောင်ခြင်းသည် အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိ၏ ကျေးဇူးတော်၊ ကရုဏာတော်ဖြင့် ၎င်းတို့၏စပ်ကြား၌ ပြုမိသည့် သေးငယ်သော အကုသိုလ်တို့အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အကြောင်းခံပင်ဖြစ်သည်။
2: အပြစ်အကုသိုလ်များကို ကြီးလေးသောအပြစ်အကုသိုလ်နှင့် သေးငယ်သောအပြစ်အကုသိုလ် ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ .
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ကောင်းမြတ်သည့် အမလ်ကျင့်ဆောင်မှုများ၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်၏ ထွတ်မြတ်မှု။ .